We She Me: ပုစွန်ခွက်ကြော်သုတ်
Anonymous - 2/3/08, 8:39 PM
ga lu..ga lu..if u2make ur blog audience salivary, it is successful.Btw, Tone Tone's head is round and pretty. She is younger & more cute without hair:D
david santos - 2/4/08, 1:05 AM
nu-san - 2/4/08, 3:07 PM
ကြာဇံနဲ့ ပုဇွန်ခွက်ကြော်သုပ်မြင်ရတာ မြန်မာပြည်မှာ ဆိုင်က ရောင်းတဲ့အတိုင်းပဲ.. မုန့်နှစ်ဖျော်တော့ ပဲမှုန့်က ပဲအစိမ်းမှုန့်ပေါ့နော်.. အမတခါမှ အဲဒီလို မလုပ်စားဖြစ်ဘူး.. ဆီထမင်းလည်း စမ်းချက်ကြည့်မယ်ဆိုတာ စိတ်ကူးထဲပဲ ရှိနေသေးတယ်.. လက်တွေ့အကောင်အထည် မဖော်ရသေးဘူး.. :P ကြာဇံသုပ်ပုံကို ကြည့်ပြီးသွားရည်တွေ မြိုချပြီး ပြန်သွားပြီ.. :(
War War - 2/4/08, 4:36 PM
Kyar Zan thote kyi ya tar attractive phyit lite tar :D
Andy Myint - 2/4/08, 5:22 PM
ဓါတ်ပုံတွေကြောင့် သွားရည် ယိုသွားသလား စာဖတ်သူများ ? ကြာဆံသုပ်ပုံက ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း ဧည့်သည်က ရိုက်ပေးထားတာပါ။ ပဲမှုန့်က အစိမ်းပါ မနု-စံ။ အားမှ လုပ်စားလေ။
AMH - 2/4/08, 8:11 PM
To make the blog audience jealous, I was the one who got to eat with real mouth and tongue. Ha ha.
War War - 2/4/08, 10:05 PM
I envy you ..............
Wanna try your pat thai as well :D
myo - 6/21/08, 10:05 PM
It is mouth watering when I see your "Ah Thote" Try writing some Myanmar recipes on your blog in this way. How about conbination ? main, side and soup dishes, and Nga Pe Yay with Tot sa yar.
hellaD - 12/17/09, 10:59 AM
Yum! i wish I could read burmese your photos look soooo yummy!